अहिले जताततै सिन्डिकेटको चर्चा छ । हुन पनि किन नहोस् ? सर्वसाधारण जनता, व्यापारी, कर्मचारी एवं संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सबै निकायको टाउको दुखाईको बिषय हो सिन्डिकेट । तर, सिन्डिकेट मौलाउन र सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन गर्न भने राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र सरकारका सबै निकाय र जिम्मेवार व्यक्तिका व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, राजनीतिक कुसंस्कार र स्वार्थ नै जिम्मेवार छन् ।
सिन्डिकेट अंग्रेजी शब्द भए पनि यो पूरै नेपालीकरण भइसक्यो । त्यो पनि अपराध, बलमिच्चाई र मनपरीतन्त्रको पर्यायवाचीको रुपमा । नेपालको सन्दर्भमा सिन्डिकेट मात्रै हैन त्यस्ता धेरै प्रवृत्तिहरु छन् । जसको जरो नउखालेसम्म देशको समृद्धि केवल नारामा मात्रै सीमित रहन्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिहरु वा संघ–संस्थाहरुको सीमित समूहको निहित स्वार्थको लागि एकलौटी ढंगले काम गर्न वा अपराधिक क्रियाकलापको लागि सिन्डिकेट खडा गरिन्छ । सिण्डिकेट लागू भएको अवस्थामा अर्थ सरकार, जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरुलाई कुनै न कुनै प्रभावमा पारेर नाफा आर्जन गर्ने, उपभोक्ताहरुलाई ठगी गर्ने, कर नतिर्ने र अन्य अपराधिक क्रियाकलाप हुन सक्छन् ।
हरेक मुलुक जति सुकै विकसित र सभ्य किन नहोस्, त्यहाँ अपराधिक क्रियाकलापहरु हुन्छन् । तर त्यस्ता अपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्न सरकारले कतिको प्रयास गरेको छ, त्यस्तो प्रयासमा कति सफल छ र त्यस्ता क्रियाकलाप गर्नको लागि हरेक निकाय र व्यक्तिको भूमिका कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । मौकामा फाइदा उठाउनेहरु, आफ्नो स्वार्थ खोज्नेहरु, अस्थिर र कमजोर सरकार र ब्यबस्थामा चलखेल गर्न खोज्नेहरु जताततै हुन्छन् । फरक के मात्र हो भने कहीं धेरै हुन्छन्, कहीं कम हुन्छन् र कहीं विधिको शासनले त्यस्ता क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रण गर्छ भने कहीं नियन्त्रण हुन सक्दैन ।
सिन्डिकेटको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा किन र के कारणले सिन्डिकेट मौलाउँछ भन्ने कुरा थाहा हुनु जरुरी हुन्छ । अनि मात्रै त्यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सिन्डिकेट नियन्त्रण गर्ने र निर्मुल पार्ने मुख्य जिम्मा सरकार वा सरकारी निकायको हो । अरु जस्तै सर्वसाधारण जनता, गैरसरकारी निकाय, व्यवसायी आदि त्यो प्रयासमा सहयोगी मात्रै हुन् ।
देशमा सिन्डिकेट र एकाधिकार अन्त्य गर्ने नियम कानून भए पनि किन मौलाएको छ सिन्डिकेट ? यसको उत्तर सहज छ । राजनीतिक संरक्षण, कमिसनतन्त्र, घुसखोरी, कर्मचारीसँग मिलिमतो, राजनीतिक दलहरुलाई दिइने चन्दा, व्यवसायी र ठूलाबडाहरुको दादागिरी आदि सिन्डिकेट मौलाउनुको मुख्य कारणहरु हुन् ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक प्रतिवद्धता, सरकारी निकायद्वारा नियम कानूनको कठोर कार्यन्वयन, स्थानीय निकाय र जनताको सक्रियता र सजगता, सुशासन र सुसंस्कारबिना सिन्डिकेट प्रथा अन्त्य हुन सक्दैन ।
नेपालमा सुशासनको कुरा भएको धेरै बर्ष भयो । २०४६ सालमा बहुदल वा प्रजातन्त्र आएपछि राजनीतिकर्मीहरुले बारम्वार उच्चारण गर्ने यो शब्द र लोकतन्त्र आएपछि सबैको सामू निकै लोकप्रिय भयो । यसै सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता भन्ने नारा सबै सामू निकै प्रख्यात पनि छ । देशमा सुशासन कायम गर्न र र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिने सबै निकाय, कर्मचारी र बजेट पनि उपलब्ध छन् । नेपालमा सुशासनको लागि तालिम दिने र परामर्श उपलब्ध गराउने गैरसरकारी निकायहरु पनि थुप्रै छन् । तर, यो बिषयमा अहिले सम्मको प्रगति हेर्ने हो भने निकै निराशाजनक छ ।
सबैको सामू अहिले पनि उहीँ प्रश्न छ, जुन पञ्चायत कालमा थियो । देशमा किन सुशासन कायम हुन सकेको छैन ? पहिले जस्तो अहिले पनि किन उस्तै निराशाजनक खवर आउँछन् ? जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मृतकको नाममा किन बृद्ध भत्ता लिन्छन् ? किर्ते योजनामा अहिले पनि किन बजेट खर्च हुन्छ ? जनसम्पर्क हुने सरकारी निकायहरुमा किन घुस बिना काम हुँदैन ? राम्राले हैन हाम्राले मात्रै किन मौका पाउँछन् ? हरेक क्षेत्रमा किन बिचौलियाको बिगबिगी छ ?
यी र यस्तै सयौ प्रश्नहरु अहिले पनि उस्तै रुपमा उठ्दैछन । सबै जिम्मेवार निकाय, व्यक्ति र संस्थाहरुलाई यी समस्याहरुको बारेमा राम्रोसँग थाहा पनि छ । तर पनि सुधारको संकेत भने अझै देखिएको छैन ।
सुशासन कायम गर्न, सिन्डिकेट प्रथाको अन्त्य गर्न र देशलाई समृद्धिको मार्गमा दौडाउन एउटा कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो हो सुसंस्कार । संस्कार भनेको त्यस्तो कुरा हो, जुन एकै दिन, महिना वा बर्षमा सिक्न सकिंदैन । न त कुनै एक जना व्यक्ति, एउटा निकाय वा सीमित समूह र व्यक्तिले नै यो सिकाउन सक्छ । सुसंस्कारको बानि बसाल्नको लागि हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज, संस्था र निकाय उत्तिकै रुपमा सक्रिय, सजक र प्रतिवद्ध हुनु जरुरी छ ।
सुसंस्कार एउटा निरन्तर अभ्यास हो । यो मनको ठोस प्रतिबद्धता हो । सबै भन्दा ठूलो कुरा सुसंस्कार भनेको सही कुरा सोच्नु, सही कुरा बोल्नु र सही कुरा व्यवहारमा लागु गर्नु पनि हो । यो हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र निकायले सही रुपमा सोच्न, बोल्न र गर्न सकेमात्रै समाजमा परिवर्तन आउँछ । र, त्यसको शुरुवात हरेक व्यक्तिले आफैंले गर्नु जरुरी छ ।
जुन बेलासम्म कुनै मानिस घुस दिन तयार हुन्छ, घुस लिने व्यक्तिको अभाव हुँदैन । जुन बेलासम्म राजनीतिकर्मीहरु ब्यापारी, एजेन्ट वा ठेकेदारहरुसँग चन्दा मागेर चुनाव जितेर सुशासन कायम गर्ने र सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भाषण गर्छन्, त्यो बेलासम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन र सिन्डिकेट प्रथा चलिरहन्छ । जुन बेलासम्म कर्मचारीसँग घुस लिएर आफ्नालाई भन्सार, एयरपोर्ट वा अरु कुनै पैसा आउने ठाउँमा सरुवा गर्ने प्रचलन हुन्छ तबसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन । जबसम्म कुनै व्यक्ति आफूलाई सक्षम नबनाई भनसुनको भरमा जागिर खोज्न भौतारिन्छ वा कोही जिम्मेवार व्यक्ति आफ्नालाई मात्रै जागिर दिन तम्सिन्छ, तबसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन ।
तसर्थ पनि, सुशासन कायम गर्नको लागि हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र निकायले सुसंस्कारको नियम आफ्नै जीवन, तह र निकायबाट आजैदेखि लागु गर्नु जरुरी छ । कुनै कुरा बोल्दैमा, योजना बनाउँदैमा वा कहीं लेख्दैमा हुने भए नेपाल आज विश्वको एउटा सम्पन्न मुलुक हुने थियो । नेपालीहरु आज अरु मुलुकमा श्रम गर्न हैन, अरु मुलुकमा मानिस नेपालमा श्रम गर्न आउँथे ।
सरकार व्यक्तिहरुको समूह हो । उनीहरु तपाईँ हामीले नै मत दिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु हुन् । त्यसैले सरकार छान्न, सुशासन कायम गर्न, सिन्डिकेट प्रथाको अन्त्य गर्न अरुको मात्रै हैन तपाई हामी सबैको सुसंस्कार, असल विचार, सही काम र ठोस प्रतिबद्धताको आजैदेखि जरुरत छ । अनि मात्रै हामी सबैले सोचेको समृद्ध नेपालको सपना साकार हुनेछ ।
(लेखक क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल लण्डनमा बरिष्ठ ब्यबस्थापक, डार्टफोर्ड काउन्सिलको काउन्सिलर र एनआरएन यूकेको सल्लाहकार छन् ।)